ဗဟုသုတ – Page 17 – PwintsSan
နွေနေပြင်းလို့ ရေတွင်းခမ်းလျင် အလျင်စလို မဖေါ်စေလိုပါ ဤစာလေးဖတ်စေလိုပါတယ်
April 26, 2018 twl 0
ရေတွင်းအတွင်းသို့ဘေးကင်းစွာဆင်းသက်နည်း ပါမောက္ခဒေါက်တာထင်ဇော်စိုး ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် ဧပြီ ၁၆ ရက် (သင်္ကြန်အတက်နေ့)တွင် ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာ၌ ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော် မြို့ ပြည်နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင် ၅ဝဝ) ဆေးရုံ အုပ်ကြီး ဒေါက်တာရန်နိုင်မောင် (ပြည်နယ်ဆေး ကုသ ရေးဦးစီးဌာနမှူးတွဲဖက်တာဝန်)၏ သတင်းတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်လိုက်ရပါ တယ်။ ထိုသတင်းမှာ […]
သင့်အိမ်မှာမွေးထားချင်စိတ်ဖြစ်လာစေမည့် ထူးခြားသော အကောင် ၉ကောင်
ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာက ထူးခြားတဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာ တွေရှိတဲ့အကောင်တွေ အပြည့်နဲ့ပါ။ အချို့ကမြင်ရဖို့အလွန်သေးပြီး အချို့ကားများကိုပင်ဖျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်။ အချို့က အလွန်နည်းပါး၍ တွေ့ဖို့အခွင့်အလမ်းနည်းလှပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ ရှားပါးယုန်တွေ၊ဦးချိုကြီးလွန်းတဲ့နွားတွေနဲ့မင်းတကယ်ရှိတယ်လို့ပင်ထင်မရတဲ့အကောင်တွေပေါ့။ ဒီနေ့တော့အမိုက်ဆုံးအကောင်၉ ကောင်ကိုပြသပါ့မယ်။ ၁။ဂလူးကပ်ဒ်အတ်တလန်တီးကပ်ဒ်ခေါ်အပြာရောင်နဂါး ဒီကောင်တွေကို အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမှာတွေ့နိုင်ပြီးလက်မအနည်းငယ်ပဲရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကျောဘက်ကငွေရောင်ဖြစ်ပြီးဝမ်းဘက်ကမည်းသလိုရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာအပြာရင့်ရောင်အတံလေးပါရှိပါတယ်။ သူတိုမှာ ပြားတဲ့ အဖျားချွန် ကိုယ် ရှိပြီး […]
“ATM ကတ်တွေ ငွေထုတ်လို့ ထွက်မလာရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ”
မျက်မှောက်ခေတ်မှာ ကုမ္ပဏီတွေ အတော်များများက လစာကို ATM ကတ်တွေထဲ ထည့်ပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ငွေသားသယ်ဆောင်မသွားလိုသူတွေကလည်း ATM ကတ်တွေ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ATM ကတ်တွေ အသုံးပြုတာတွင် ကျယ်လာပေမယ့် ငွေထုတ်စက်တွေမှာ ငွေထုတ်တဲ့အခါ အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံ ငွေမထွက်တာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါမျိုးကြုံလာတဲ့အခါ ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာကို […]
(၁) “ဖုန်းကို တစ်ချိန်လုံး ပလပ်ထိုးထားတာ ဘက်ထရီ ပျက်စီးစေတတ် ပါသလား” ================================================ ဖုန်းကို မည်မျှ ကြာကြာ အားသွင်းသင့်သလဲ? ဟူသော မေးခွန်းသည် မိုဘိုင်းဖုန်းများ စပေါ် ကတည်းက လူသားတွေ မေးလာ ကြသော မေးခွန်း ဖြစ်သည်။ ယခု ထိလည်း မေးနေကြဆဲ၊ […]
ယောက်ျားလေးတိုင်း ရှောင် / မိန်းကလေးတိုင်း မဖြစ်အောင် သတိထားသင့်တဲ့ တန်ဘိုးနည်း မိန်းမဆိုတာ…လေး ဖတ်မိလို့ပါ
သီတင်းကျွတ်ပြီ…ဝါထွက်ပြီ…။ တမင်သက်သက် ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး လူစုကြတယ်..။ ဝါတွင်းသုံးလ အောင့်အီးထားကြတဲ့အ သောက်အစားကိစ္စလေးတွေကို စတင်ဖွင့်လှစ်ကြမယ်ဆိုပြီး..၊ တကယ်တော့.. လူတွေက…..ကိုယ့်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ကိုယ် သွားနေကြတာပါ..။ အဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့..ကိုယ်နဲ့ဘယ်လောက်ထိလိုက်ဖက်မလဲဆိုတဲ့ပေတံနဲ့..။ ညနေစောင်း… ကျောက်ကုန်းမှာဆုံကြမယ်..၊ YAMMYမှာလူစုံတော့ ငါးနာရီဝန်းကျင်.. အင်းစိန်ဘက်ကလာတဲ့သူလည်း ရှိတယ်.. တောင်ဥက္ကလာဘက်ကလာသူလည်းရှိတယ်။ အားလုံးက လေးဆယ်ကျော်အိမ်ထောင်သည်တွေချည်းပဲ..။ ဘီယာလောက်နဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ကြမယ်ဆိုပေမယ့် ဝိုင်းအလယ်လောက်မှာ အနက်တောင့်တွေ..အနီတောင့်တွေပါလာ တယ်။ […]
2018 – ခုနှစ်အတွက် ထီထိုးရန်ကောင်းသော မင်္ဂလာရက်များ
မင်္ဂလာပါ ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအားလုံးအတွက် ထီထိုးရန်ကောင်းသောအခါရက်ကောင်းရက်မြတ်များကိုကြိုတင်သိရှိနိုင်ရန်ဆရာမင်းသုခကိုယ်တို င်ရေးသားတွက်ချက်ပြီး ရေးသားပြုစုပေးလိုက်ပါတယ်။သင်တို့ရဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကို ဖတ်ရှုစေချင်ရင် like & share လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ကူညီပါ မျှဝေပေးကြပါ။ 2018 – ခုနှစ်အတွက် ထီထိုးရန်ကောင်းသော မင်္ဂလာရက်များ ဇန်နဝါရီလ. = ၄၊ ၆ ၊ ၈ ၊ […]
အိပ်နေရင်း သေ သွားတယ် ဘယ်လိုသေသွားရတာလဲ (ဒါမျိုးဘာလို့ဖြစ်သွားရတာလဲ လူတိုင်း သိထားလို့ မမှားဘူးနော် )
အိပ်ယာအထမှာလိုက်နာစရာ အားလုံး အတွက်​ အ​ရေးကြီးလို့ မိတ်​​ဆွေ ဆရာဝန်​တစ်​​ယောက်​ ​ပြောပြထားတဲ့ ​ဟောဒီအချက်​​လေးကို သတိထားကြဖို့ မျှ​ပေပါရ​စေ။ ည ည အိပ်​​ပျော်​ ​နေရာကဆီးသွား​ချင်​စိတ်​​ကြောင့်​နိုးလို့ ဘဲဖြစ်​ဖြစ်​ နံနက်​​စော​စော အိပ်​ရာ အထမှာ ဖြစ်​ဖြစ်​ လူတိုင်း *မိနစ်​ဝက်​ သုံးကြီမ်​ သတိထား* ခြင်းဖြင့်​ ရုတ်​တရက်​ […]
ယောကျာ်း တွေ လိုချင်နေတာ ဒီလို မိန်းမ မျိုးပါ ဖတ်ကြည့်ပေါ့ အရမ်းကောင်းပါတယ်
ယောကျာ်း တွေ လိုချင်နေတာ ဒီလို မိန်းမ မျိုးပါ ဖတ်ကြည့်ပေါ့ အရမ်းကောင်းပါတယ် ယောကျာ်း တွေ လိုချင်နေတာ ဒီလို မိန်းမ မျိုးပါ ။ဖတ်ကြည့်ပေါ့ အရမ်းကောင်းပါတယ်…😊😊😊ယောကျာ်း တစ်ယောက်က ပြောတယ် ….. (၁)..မိန်းခလေး တစ်ယောက်က သိပ်ချော သိပ်လှစရာမလိုဘူး ။ လူကြားသူကြားထဲ […]
ကလေးကမအိပ်ဘဲ ဗိုက်လေးကော့ကော့ပြီးငိုနေတာနဲ့ ဆရာဝန်ဆီခေါ်သွားသောအခါ
ကလေးကမအိပ်ဘဲ ဗိုက်လေးကော့ကော့ပြီးငိုနေတာနဲ့ ဆရာဝန်ဆီခေါ်သွားသောအခါ အရမ်းထိတ်လန့်ဖို့ကောင်းတာကိုတွေ့လိုက်ရ ကလေးက ကောင်းကောင်းမအိပ်ဘူး ဗိုက်လေးကော့ကော့ပြီးငိုနေတာနဲ့ သမီးကိုမွေးပေးတဲ့ဆရာဝန်ဆီခေါ်သွားတော့… ကျမကိုဆူလိုက်တာမှ …တော်တော့ကိုဆူ ငေါက်တာ… ပြီး ကလေး ချက်လေးကိုဖြဲ ဇာဂနာသေးသေးလေးထိပ်မှာ အရက်ပြန်စိမ်ထားတဲ့ဂွမ်းလေးပါတ်ပြီး နိူက်ပြီးသုတ်ပြတာ…. အမလေး ပိုးလောက်လန်းသေးသေးလေးတွေ အထွေးလိုက်ပါလာတာ … မျက်မြင်ပါဘဲ..ကျမရဲ့သမီးကကံကောင်းလွန်းလို့စောစီးစွာသိခဲ့လို့အသက်အန္တရယ်မဖြစ်ခဲ့တာပါ ဆရာဝန်ကသေချာရှင်းပြတာက အာ့ ဆနွန်းမှူန့် […]